Manan-danja ve izany i Jesosy raha Rose? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Tsaroako ny nitombo ny fianakaviako dia mandeha ho an'ny rehetra ny Paska. Te handeha izahay any amin'ny tsenambarotra ny herinandro talohan'ny ka maka sary miaraka amin'ny Paska Bunny. Izaho manokana dia mihevitra fa no creepiest rehetra ny fialan-tsasatra mascots. A goavana bitro? Izay no traumatizing ho an'ny ankizy. Tsy vitan'ny hoe, nefa ianao nilaza fa izy no handeha maneho ny tao ny an-trano nandritra ny faran'ny herinandro? Ihany amin'ny Paka, Te handeha izahay any am-piangonana, ary avy eo dia tonga an-trano isika Te. Te isika manao ny Paska fihazana atody. Te hanana fianakaviana isika noho. Te firy isika Paska harona rehetra karazana zavatra tao ka.
Ary maro amintsika manana tantara toy izany koa. Ny tsy kristianina manana namana na dia tena mitovy tantara. Rehetra izany efa antsika ny fahazazany tany ny kolontsaina izay mahalala ny fitsanganana amin'ny maty toa an'i Jesosy no ao ambadiky ny fankalazana, fa ny olona maro fa tsy tena ilaina ny fankalazana.
Nahoana no zava-dehibe io Discussion no
Ny fanontaniana mangataka isika sy miezaka ny mamaly amin'izao fotoana izao dia: Tsy zava-dehibe tokoa raha i Jesosy natsangana tamin'ny am-pasana? Mazava ho azy tsy maninona raha toa ianareo rehetra te-hanao dia manana atody Paka mihaza. Izany manana na inona na inona ny ifandraisany amin'ny Jesosy. Fa isika rehetra te mihoatra noho ny avy amin'ny fiainana. Mihevitra aho fa izany no tena ilaina fanontaniana, ary Heveriko fa zava-dehibe ny mangataka ny antony vitsivitsy.
1, Ny sasany aza mihevitra fa hatramin'izay nitranga. Maro amintsika no mihevitra ny fitsanganana amin'ny maty ny olombelona aorian'ny fahafatesana mba ho azo. Rehefa mijanona ny fo, tsy misy intsony ny fiainana mba ho nanan-. Vatana tsy mahazo mandeha indray. Mbola tsy nahita azy, tsy toa mifanaraka amin'ny lalàn'ny natiora, ary maro no matoky fa tsy hitranga. Koa izao no zava-dehibe ny mieritreritra momba ny.
2, Ny sasany amintsika mihevitra izany ho ilaina. Tsy mieritreritra be loatra momba izany na fomba. Angamba nataony, angamba tsy nanao. Inona no tsy maintsy atao eo amin'ny fiainana mihitsy. Angamba aho mitandrina ny an'i Jesosy amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainako taty aoriana, fa izao tsara aho. Aho rehefa falifaly, Aho rehefa tratran'ny zava-baovao, Mianatra aho, Miezaka aho mba hanorina fototra na ny asa. Aho tsy tena miahiahy momba ny fitsanganana amin'ny maty izao ankehitriny izao. Fa ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy ilaina ho an'ny na iza na iza. Ary te-hanaporofo fa nandritra ny fifanakalozan-kevitra amin'izao fotoana izao.
3, Ny sasany amintsika mieritreritra ny fitsanganana amin'ny maty araka ny efa panahy tantara. Izany ny mariky ny fiakaran'ny mihoatra noho ny toe-javatra. Tena tsara tarehy tantara izany ny olona voasambotra ny sainy sy ny fony ny farany 2000 taona. Angamba misy fitondran-tena ny tantara, fa na inona na inona mihoatra noho izany.
Ny antony Mihevitra aho fa izany dia zava-dehibe ny miresaka momba ny dia satria ireo telo ny fomba fijery tsy mitovy noho izay ampianarin'ny Baiboly momba ny fitsanganana amin'ny maty i Jesosy. Koa raha maro amintsika mieritreritra zavatra hafa momba ny fitsanganana amin'ny maty noho ny Baiboly tokony manontany tena isika na tsia ny raharaha. Paska vanim-potoana lehibe dia afaka hanana izany fifanakalozan-kevitra.
Raha izany no fomba fiheverantsika ny fitsanganana amin'ny maty dia ny valiny tsy, tsy maninona. Fa raha tsy efa tsaina, Kristianina aho, ary mihevitra aho fa marina i Jesosy nitsangana avy tao am-pasana. Ary tsy izany ihany no mihevitra fa zava-dehibe, Mihevitra aho fa tsy misy antenaina intsony daholo izany.
Nahoana Heveriko fa natsangany
Te-hilaza aminao fohifohy ny antony Mino aho fa natsangany tamin'ny maty. Tsy handeha aho mandany iray taonina ny fotoana ireo, satria tsy ny tanjon'ny lahateny ity. Ny tanjoko anio hariva dia ny miresaka momba izany na tsia zava-dehibe, fa raha handeha aho ny manizingizina fa tena nitsangana izy ka manao filazana mifototra amin'ny izay, Tiako ho fantatrareo ny antony Mino aho fa.
1. Treats ny Baiboly izany ho toy ny zava-nitranga ara-tantara
Rehefa mamaky ny Soratra Masina, ny Apôstôly dia tsy hitondra ny fitsanganana amin'ny maty toy ny na inona na inona latsaky ny marina. Tena mazava fa tsy mihevitra ny tenany ho nanoratra anganongano. Rehefa Nitory ny Apostoly toriteny rehefa niakatra tany an-danitra i Jesosy, dia miteny ny nahafatesan'i Jesosy (izay uncontested) ary ny fitsanganana amin'ny maty Jesosy tamin'ny mitovy hery. Toy ny zava-misy raha toa ka samy.
Soratra Masina mazava fa i Jesosy ara-bakiteny nitsangana tamin'ny maty. Ary mino aho fa ny Soratra Masina mba ho ny Tenin'Andriamanitra. Mino aho fa azo itokisana. Tsy mino aho fa lainga na diso. Ary ny fomba ny voasoratra dia tsy ny fomba mety hanoratra azy raha nanao izany. Izay mitondra ahy ho any amin'ny antony faharoa Mino aho fa ny fitsanganana amin'ny maty nitranga.
2. Fijoroana vavolombelona azo itokisana no itokiako
Rehetra isika hanaiky ny zavatra eo amin'ny fototry ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny olon-kafa. Izahay, dia tsy tao amin'ny basket lalao, fa matoky mpandahateny fanatanjahan-tena na ny namana izay misy recap. Tsy mila porofo ara-batana. Matoky azy ianao. Nalahelo izahay kilasy, fa matoky izahay mpiara-mianatra mba handeha eny an-tsoratra. Izahay, dia tsy tao amin'ny Gettysburg adiresy, tsy misy sary, fa matoky izahay fa nitranga. Matoky izahay fa ireo teny ireo ny an'i Abraham Lincoln.
Ankehitriny dia fantatro ireo zavatra ireo hafa noho ny fitsanganana amin'ny maty, nefa lazaiko fa ny hoe, Misy zava-mitranga fa mino nitranga satria nandre ny momba izany avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka. Tena voajanahary sy ny manan-tsaina izany ny atao raha tsy misy antony tokony hiahiahy azy.
Ary ny olona izay miresaka momba ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly, dia hatrany tahaka ahy dia mahay milaza, vavolombelona azo antoka. Tsy misy antony ho ahy ny hiahiahy azy ireo. Raha ny tena izy, nisy an-jatony ny vavolombelona nahita maso izay nahita an'i Jesosy. Tsy afaka mieritreritra ny misy fitsarana izay 500 vavolombelona nahita maso no tsy ho ampy mba hanaporofoana ny raharaha. Mino aho fa ny fijoroana ho vavolombelona dia mavesatra sy i Jesosy dia tsy maintsy efa nitsangana tamin'ny maty.
3. Izany ny tsara indrindra Fanazavana ny zava-misy
Ny piandohan'ny Kristianisma no tena mahaliana. Efa nisy lehilahy jiosy teraka tany Galilia, mampianatra miaraka amin'ny karazana fahefana vaovao. manao fahagagana. nanangona mpanara-. Mahazo azom-pahoriana amin'ny manam-pahefana jiosy. Ny hoe nandao ny namany. Ny hoe novonoina. Ary avy eo ny fasana dia hita fa foana.
Ary toa io lehilahy io, izay nilaza izy fa hanao mahagaga things- fitsipika, nanjaka, hanorina indray ny tempoly ao anatin'ny telo days- maty na dia lasa ny loharanom-ny hetsika. Nandao azy ny mpianatra. Dia raiki-tahotra ka hahakivy satria nijery tahaka dia nanaraka azy foana. Fa avy eo, rehefa namaky ny bokin'ny Asan'ny Apostoly, dia hitantsika fa izy rehetra tampoka sy feno fahasahiana nampahery. Ary vonona ny hiatrika fanenjehana ho an'i Jesosy.
Mampianatra izy ireo fa ny Andriamanitra, ny Jiosy kolontsaina, izay manaiky fa Andriamanitra dia iray ihany. Mampianatra izy ireo fa nitsangana tamin'ny am-pasana, ary hampianatra azy ela rehefa tonga izany. Noho izany ny olona dia mbola manodidina. Raha tsy hitranga, dia ho squashed. Ny manam-pahefana afaka nakatona ny toe-javatra rehetra, izay dia loza mitatao ho azy ireo, amin'ny alalan'ny mampiseho fotsiny ny olona ny vatany. Ny hetsika Mitombo, ary ny mpanara-dia an'i Jesosy, dia maro. An'arivony tsy ho ela taorian'ny. Rehetra fa ny iray amin'ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy, miafara rehefa novonoina noho ny finoany an 'i Kristy. Novonoina fa ity lehilahy ity. Izy ireo dia azo antoka, ary nanao ny zava-misy fa Izy no Zanak'Andriamanitra, nitsangana tamin'ny maty fa efa novonoina ho azy.
Ahoana no hanazavana fa? Mieritreritra aho fa ny tsara indrindra fanazavana ireo zava-misy, dia satria izy no tena nitsangana avy ao am-pasana. Fantatro aho dia tsy ho faty noho ny angano izay nanao ny. Ny zavatra tokana izay mety handresy lahatra an'ireo olona rehetra ireo, dia fa tena nitsangana.
Koa amin'izany ao an-tsaina, Te-hiresaka amin'ny alalan'ny sasany ny fiantraikan'ny ny fitsanganana amin'ny maty.
Koa ny sisa ny fotoana, Ho isika miresaka ny momba io fanontaniana io avy eo. No zava-dehibe raha toa ka natsangany tamin'ny am-pasana. Handeha aho hilaza aminao ny antony Heveriko fa zava-dehibe. Handeha aho ny hanao izany amin'ny alalan'ny mijery andalana avy ao amin'ny Baiboly, 1 Corinthians 15. Ary avy amin'izany andalan-teny, I Handeha mba hampiseho aminao ny telo fiantraikany ny fitsanganana amin'ny maty.
In 1 Corinthians 15, Paoly mihevitra ny fitsanganana amin'ny maty, tsy ho toy ny zava-misy ara-tantara, fa toy ny hoe ny fiantraikany fiainana sy ny fahafatesana.
Ireo antony telo no tena zava-dehibe ho tsirairay avy amintsika amin'ny efitrano ity. Izy ireo zava-dehibe ho isaky ny olona velona. Ary ianao hoe nahoana Mino aho fa ao anatin'ny fotoana fohy. Ireto no Hoy i Paoly:
Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, dia na i Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha Kristy tsy natsangana, dia ny toriteninay, ary foana ny finoanareo dia zava-poana. Mihitsy aza isika hita ho ny nandisoany an'Andriamanitra, satria nijoro ho vavolombelona momba an'Andriamanitra izay nanangana an'i Kristy, izay fantany fa tsy hanangana raha marina ny maty, dia tsy mba natsangany. Fa raha ny maty tsy hatsangana, na i Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha Kristy tsy natsangana, poana ny finoanareo, ary ianao no mbola ao amin'ny fahotanareo. Ary ireo koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy no very. Raha ao amin'i Kristy no anantenantsika amin'izao fiainana izao ihany, isika rehetra ny olona mba nahita famindram-po indrindra.
(1 Corinthians 15:13-19 DIEM)
I. Raha i Jesoa dia tsy hanangana, tsy misy Vaovao Mahafaly
Inona no holazaina amin'ny izany? Mazava ho azy fa misy zavatra isika indraindray eto amin'ny vaovao tsara izay. Fa tiako ho lazaina farany vaovao tsara, ilay antsoin'ny Baiboly hoe ny Filazantsara. Ny marina dia, na misy zavatra tsara mitranga eo amin'ny vaovao sy eo amin'ny fiainantsika, na dia zavatra izay afaka manome fanantenana antsika vetivety, Tsy misy ny olona izany zavatra izany dia afaka manome antsika ny fanantenana maharitra.
A hetra refund maso tsy afaka manome antsika fanantenana maharitra. Ny fanekena ho nahazo diplaoma fandaharana tsy afaka manome fanantenana YS maharitra. Ny andraikitra na ny fanambadiana, tsy afaka manome antsika fanantenana maharitra. Rehetra 'ireo zavatra ireo dia ho tonga amin'ny farany. Ary azo keriny avy amintsika amin'ny indray mipi-maso. Azo antenaina fa maharitra? Azo antenaina izany manerana izao rehetra izao sy ny lehibe?
Ny Baiboly dia tena zava-misy sy marina momba ny toe-ny izao tontolo izao. Isika tapaka, ny tontolo tapaka, ary ny zavaboary rehetra dia mila haverina amin'ny laoniny. Fantatray ny izao tontolo izao dia tapaka. Avy amin'ny loza araka ny natiora ny aretina. ary ny heloka bevava. Dia toa tahaka ny misy vaovao isan'andro tifitra faobe izao. F'inona no mitranga? Brokenness.
Tsy fotsiny avy tao aza. Isika rehetra dia notapahina koa. Ny porofo izany eo amin'ny fiainantsika dia ny fahotantsika, ny fanahiana, tapaka ny fifandraisana, mifanohitra amin'ny iray hafa, ary ny ratsy indrindra ny rehetra, ny fisarahana amin'Andriamanitra.
Efa nieritreritra momba ny hoe nahoana isika no fomba isika? Nahoana na dia miezaka mafy isika, tsy afaka ny ho tonga lafatra? Nahoana isika no manao ny zavatra ataontsika? Nahoana isika no mbola miverina ny zavatra izay mitandrina hanisy ratsy antsika? Nahoana isika no manao manimba fanapahan-kevitra? Nahoana isika no manimba ny hafa? Isika dia tapaka. Izay ny vaovao ratsy.
Jesosy no Ilay Andriamanitra izay naniraka ny hamerina, ary indrindra mba hamerina antsika ny Mpamorona. Izay ny vaovao tsara.
Tsy misy isalasalana fa ny Fivavahana Kristianina tsy manam-paharoa eo amin'ny izao tontolo izao ny fivavahana. Ny iray amin'ireo zavatra tsy manam-paharoa momba ny kristianisma dia izany mifototra amin'ny zava-nitranga ara-tantara amin'ny fomba tsy manam-paharoa. Misy zavatra sasany izay tena nitranga fa matoky. No itokianay, ny tena lehilahy, izay raha ny marina maty, ary izay tena natsangana tamin'ny maty. Ary raha izay zavatra tsy marina, dia ny Vaovao Mahafaly * momba ny Mpamonjy dia tsy marina.
Muhammad mpaminany ao amin'ny finoana Silamo, dia maty. Silamo mahalala izay misy ny tena sy ny fasana dia. Ary izao tsy mba manimba ny finoana silamo.
Ny Bouddha Nodorana taorian'ny nahafatesany, ary misy ny mandoro faty relìka izay nozaraina ho samy hafa fianakaviana. Ka dia fantatro izay ny vatana ny Bouddha dia. Ary izay tsy mba manimba ny finoana ny Bodista.
Confucius 'vatana dia nalevina tao amin'ny toerana nahaterahan'i any Shina. Ny Toy izany koa ny Joseph Smith, isan-karazany Papa, sns. Ary ny hoe ireo olona maty tsy mba manimba ny finoana ireo mpanara-.
Fa raha misy olona dia ny nahita ny fatin'i Jesosy, Kristianisma mitsahatra misy. Fiangonana kristianina no tsy misy dikany. Mpandainga ny mpitory kristianina. Ary ny mpanara-dia an'i Kristy dia fanantenana. Mazava ho azy raha toa ny maty nisy fatin'i Jesosy mba ho hita, ny manam-pahefana ho vao nampiseho azy ny olona mba Squash ny fielezan'ny ny fanoloran-tena ara-pivavahana tamin-dralehilahy. Fa ny fotoana dia manao aho fa zava-dehibe.
Henoy izay lazain'i Paoly eto amin'ny 1 Corinthians 15. Vao maraina dia manondro ny Filazantsara na ny Vaovao Tsara ho toy ny zava-dehibe indrindra. Fa izy no dia nitory azy ireo, nahazo izany, ary izy ireo amin'izao fotoana izao mitsangana ao. Fa mihaino izay lazainy eo amin'ny andininy faha 14.
"Ary raha Kristy tsy natsangana, dia ny toriteninay, ary foana ny finoanareo dia zava-poana. Mihitsy aza isika hita ho ny nandisoany an'Andriamanitra, satria nijoro ho vavolombelona momba an'Andriamanitra izay nanangana an'i Kristy. "
Paoly dia tsy mihevitra ny fitsanganana amin'ny maty dia panahy sasany tantara. Izy mihevitra fa ny finoana miankina eo amboniny. Noho izany rehefa hitondra azy toy ny sasany panahy tantara, mety koa mody intsony fa ny Fivavahana Kristianina izany. Mety koa tsy mampiasa ny Baiboly fa. Izany Tsy izany no tian'i Paoly holazaina, na natao. Ary izany ho fanararaotana ny soratra masina mba hitondra azy izany.
Ny finoana kristianina dia mifototra amin'ny News. Izany dia midika hoe mifototra amin'ny fanambarana ny vaovao momba ny fiainana, fahafatesana, ary ny fitsanganan 'i Kristy.
Raha tsy marina izany, Ary Paoly fitoriana dia zava-poana. Tsy vitan'ny hoe, fa ny Kristianina ny Finoan'ny zava-poana. Inona no mino, Raha ny tantaran'i Jesoa dia tsy ho tsara fiafara? Tsy misy afa-tsy vaovao ratsy. Mpanota aho, Niezaka i Jesosy mba hanao zavatra momba izany, fa amin'ny farany fahafatesana nahazo azy
Koa raha tsy nanangana, tsy misy Vaovao Mahafaly.
Fa satria natsangany, misy ny Vaovao Tsara
Misy Vaovao Tsara! Ny vaovao Marina. Afaka haverina amin'Andriamanitra. Tiako ny mamaky anareo ny andininy vitsivitsy voalohany ao 1 Corinthians 15.
Ary tiako ny mampahatsiahy anareo, rahalahy, ny filazantsara notoriko taminareo, izay nandray, in izay mitsangana, ary izay no ho voavonjy, raha mihazona mafy ny teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana. Fa natolotro ho anareo toy ny zava-dehibe voalohany izay noraisiko: dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, fa efa natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary izay Qdia niseho tamin'i Kefasy, dia vao tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Avy eo, dia niseho tamin'i maherin'ny dimanjato rahalahy nisy fotoana, ny ankamaroany izay mbola velona, na ny sasany efa nodi-mandry. Avy eo dia niseho tamin'i Jakoba, dia tamin'ny Apostoly rehetra. Last rehetra, toy ny iray tonga volana Teraka, dia niseho tamiko koa izy.
Jesosy dia maty noho ny fahotantsika. Dia nitsangana noho ny fahotantsika. Izany ampahany amin'ny Filazantsara Tantara. Izany no vaovao lehibe ho an'ny mpanota.
Ny zava-misy fa nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manamafy ny zavatra rehetra hoy izy momba an'Andriamanitra sy momba ny tenany. Izany no hajia ny hafatra. Izany no milaza fa tsy misy hafa finoana mpitarika ny rehetra dia afaka na hanao.
Hitanareo fa ity vaovao ity no tena zava-dehibe tamin'i Paoly fa hoy izy raha dia ilay ampahany tsy marina, dia ny fitoriana no zava-poana. Eritrereto ny momba ny fiangonana no mandeha any ny alahady. Raha ny fitsanganana amin'ny maty no tsy marina mahakasika ny fitoriana mihitsy? Ve ianao na dia handre ny momba ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty i Kristy sy ny fomba mihatra amin 'ny fiainantsika?
Fitsanganana amin'ny maty io no ampiharina eo amin'ny fiainanao. Tsy zava-dehibe ho anao ny fiainana, satria dia sarotra. Voavela ny tena. Ny aretina tena misy. Ny fahafatesana tena. Misy vaovao tsara ho antsika? Iza no mandresy amin'ny farany? Misy vaovao tsara. Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ary ny handeha havaoziko ny zavatra rehetra. Ny fasana foana manaporofo fa marina ny fampanantenany.
Aoka ny hanohy hiresaka momba ny fiantraikany
II. Raha i Kristy tsy manangana amin'ny maty, tsy misy famelan-keloka
Aho handeha hamaky ny sasany momba ny famelan-keloka kisendrasendra tononkira.
"Tompo hamela azy, dia nahazo hery izy ireo maizina ao aminy / fa koa nahazo ny fahamarinako hanotana. "
"Tompo ô masìna ianao mamela ahy noho ny sinnin '/ aho no nilaza fa tsy vita aho / Kanefa mivavaka aho mialoha / Asaovy ny lalana ny masony izy ireo jerena toa milalao amin'ny pataloha."
J. Cole, Mafana Up
"Mivavaka aho mba hahazo famelan-keloka aho / ho an'ny fanapahan-kevitra ratsy rehetra nataoko / rahavavy rehetra I nilalao / antony mbola misavoritaka aho mandraka androany / Ary ny tsy misy ny fahadisoana aho nanao ny fanapahan-kevitra nataoko / Izao no fiainana nofidiko, na ny marimarina kokoa, ny fiainana izay nifidy ahy "
Jay-Z, Desambra faha-4
"Miezaka ny mody fa samy hafa aho fa amin'ny farany izahay rehetra toy izany koa / mangataka amin'Andriamanitra, ray mamela ny n **** aho iany tsy fiovana. "
"Izaho no mpanota, izay angamba no iany fahotana indray / Tompo hamela ahy, Tompo mamelà ahy / fa ny zavatra tsy azoko. "
Sarobidy rehetra ny famelan-keloka. Na ry zalahy izay mazava fa tsy nikasa ny tena nanova. Ny olona rehetra te-ho voavela heloka.
Ny nila famelan-keloka
Misy ny olona tsy eto izay no tonga lafatra. Rehetra tsy lavorary isika ary manota isika. Ny fahotana dia tsy toy izany ny teny malaza. Isika indraindray teny malefaka kokoa toy ny kileman-toetra, na ny tsy fahalavorariana, na ny fahadisoana, fa ny teny hoe "ota" mampita zavatra voafaritra kokoa noho ireo teny hafa. Rehefa miresaka ny Baiboly momba ny fahotana izany dia midika hoe tsy nankato an'Andriamanitra amin'ny zavatra, ny teny, na ny eritreritrao. Izany dia midika hoe tsy ampy ny marika, lavo fohy ny zavatra takin'Andriamanitra, mikendry marika diso, nikomy tamin'Andriamanitra.
Ary ny Baiboly milaza fa ny fahotana dia tsy kisendrasendra fotsiny tapaka fitsipika, fa ny fahotana dia ny tsy fankatoavana mikendry mivantana amin'ny Andriamanitra. Andriamanitra maka ny fahotana manokana, ho toy ny fanafihana ny azy manokana sy ny hatsaram-pony, fahendrena, sy ny voninahitra. Toy izany koa ianareo olona may Te haka an-tranonao any, tsy toy ny fanafihana an-tranonao, fa ianao aza, Andriamanitra maka misy ny tsy fankatoavana noho ny zavaboary toy ny fanafihana azy. Tsy misy na inona na inona dia tsy manana. Ny fahotana dia heloka manohitra ny tsara Andriamanitra. Ary izany Andriamanitra no Mpitsara izay isika Ho hitsangana eo anatrehan'i.
Inty ny fanontaniana ho anareo: Ve ianao manantena ny ho voavela heloka ireo fahotana? Nahoana? Nahoana no tsara ve mpitsara aoka mpanota eny ny lelam-pitana ho toy izany heloka bevava mahatsiravina toy ny fahotana? Tsara ny hany fomba izay mamela ny fahotana dia raha ny efa nandoa ny. Ary misy ihany izay no mbola nilaza ny handoavana ny ota, Jesosy. Ary ny fitsanganana amin'ny maty an'i Jesosy no porofo fa iny no nanaiky fandoavam-bola.
Ny iray amin'ireo zavatra i Paoly momba an'i Jesosy, raha tsy natsangana dia: "Ny finoanao no very maina ary mbola ao amin'ny fahotanareo."
Ny dikan'ny hoe ho amin'ny fahotanareo, dia ny hoe tsy maintsy mandoa ho azy ireo. Izany dia midika hoe ry zareo mbola eo ny firaketana an-tsoratra. Izany dia midika hoe ianao mbola amin'ny fanandevozana ho azy ireo. Izany dia midika hoe ianao no tsy voavonjy amin'ny. Izay midika fa tsy hahazo famelan-keloka ho azy ireo. Ny famelan-keloka miankina amin'ny ara-batana ara-bakiteny nitsanganan'i Jesosy Kristy.
Ny hazo fijaliana dia teo amin'nitoeran'i Jesosy nandresy ny fahotana. Izany no toy ny tolona lalao amin'ny fahotana sy ny ratsy. Ary raha i Jesoa dia tsy mifoha, izay midika hoe ota Won.
Fivavahana hafa tsy manao zavatra maro ny famelan-keloka. Tsy misy fanazavana ny antony tsara no hamela azy ireo mpitsara. Mahazo any an-danitra manao ny tsara kokoa noho ny ratsy, fa ahoana ny amin'ireo ratsy? Tsy misy amintsika no mampiseho ny mpitsara izay aoka mpamono olona eny ny lelam-pitana satria nanampy tranainy vehivavy manerana ny arabe ny ampitso. Ny fahotana tsy maintsy aloa ho an'ny.
Tsy te-hijoro eo anoloan 'Andriamanitra amin'ny fahotanareo. Misy toerana roa ianao dia afaka ny ho, ao amin'i Kristy, na amin'ny fahotanareo.
Ary raha i Jesoa dia tsy hanangana, tsy misy famelan-keloka.
Fa satria natsangany, misy ny famelan-keloka!
Jesosy nanao be dia be ny karazana ara-pivavahana, satria very saina, Tsy vitan'ny hoe Izy nanasitrana ny olona, fa dia nilaza azy ny fahotany ny helokao. I Jesosy fahefana hamela heloka. Ny papa dia tsy manana izany fahefana, mpiandry ondry tsy manana izany fahefana, ny mpisorona tsy manana afa-tsy Andriamanitra fa authority-. Ary Jesosy dia Andriamanitra tamin'ny nofo.
Andeha dikany ny teny famelan-keloka. Lazao namako mamely tehamaina ahy ao amin'ny tarehy. Mety tsy ho famelan-keloka raha nilaza fa maninona, fa nikasa ny tahamaina Azy indray fa taty aoriana. Ny famelan-keloka no tsy manaiky hoe ny fialan-tsiny aho, dia midika izany fa hitondra azy toy ny hoe tsy nanota tamiko. Ary mba ho nikorontan-tsaina sy ny gana na oviana na oviana dia mandeha ho avo dimy. Mba tsy matoky Azy toy izany, fa Izaho kosa tsy hanao izany fahotana manohitra azy. Tsy miezaka ny haka azy indray, na ho mangidy mankany azy. Ny fifandraisana dia azo naverina tamin'ny laoniny.
Ny fahotana dia lehibe ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Tena lehibe toy izany ho azy, fa tsy hamela izany fotsiny. Fantany fa tsy maintsy ho voasazy. Ary Andriamanitra tia antsika loatra fa dia naniraka an'i Jesosy. Ary Jesosy tia antsika loatra fa efa vonona ny handray izany famaizana amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Izany no ny hazo fijaliana dia. Izany Jesosy hanitsaka sy maka sazy izay mpanota mendrika.
Toy aho tao amin'ny efitrano fitsarana, izaho anefa mbola mazava meloka, fa raha tokony ho voasazy olona iray maka ny sazy ho ahy.
Ny Mahasoa ny famelan-keloka
Raha matoky an'i Kristy Andriamanitra namerina ny fifandraisany amintsika. Izy Ho mamafa madio ny firaketana an-tsoratra. Izany ny didim-pitsarana ny tsy meloka amin'ny Mpitsara ny olona rehetra izao. Izy Ho hanaiky anay ho amin'ny fifandraisana aminy. Tsy hanao ny fahotantsika hamely anay.
Romanina 4:7-8 hoy i, "Sambatra izay voavela ny helokao, ary voasarona ny fahotany; sambatra izay olona manohitra izay ny Tompo dia tsy isaina ny fahotany. "
Tsy misy intsony ny zavatra rehetra mampahatahotra ny izao rehetra izao noho ny hijoro eo anoloan 'Andriamanitra amin'ny fahotanareo. Saingy tsy misy fitahiana lehibe kokoa eo amin'izao rehetra izao, toy izay hahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra.
matetika, Ny Kristianina manana laza amin'ny hafa ny maha tena marina. Ary heveriko fa ny loza. Noho ny famaritana ny matoky an'i Kristy dia ny mifanohitra tanteraka ny tena fahamarinana. Izany dia midika hoe miaiky isika tsy manana ny fahamarinana. Ary tonga an'Andriamanitra amim-pinoana, mba hamela antsika ny tsi-fahamarinana. Koa raha ny Kristianina no fomba diso ny finoana ho anao, mamindrà fo amin'izy ireo. Izany Tsy izany no nampianarin'i Kristy
Moa ve ianao maniry ho voavela amin 'ny fahotanareo? Tiako ho hieritreritra momba ny fiainanao. Maro ny zavatra efa nanao izay tsy marina. Izahay efa nandainga, ary efa liana. Maro amintsika no fornicated ary nahazo mamo. Maro amintsika no efa nangalatra sy ambakaina. Maro amintsika mankahala ny hafa, izahay kamo, ary ny lisitra afaka handeha. Isika rehetra. Manafintohina ny fiainantsika Andriamanitra masina. Ary manontany tena aho raha ela mba ho voavela ireo heloka.
Ny vaovao tsara dia, fa ny famelan-keloka tsy ampy an 'i Jesoa Kristy. Fa raha ny marina izy raha nitsangana tamin'ny maty. ary ihany, raha mino ny fiainana, fahafatesana, sy ny fitsanganana amin'ny maty i Jesosy.
Ndeha isika handinika ny farany kolaka
III. Raha i Kristy tsy hanangana, tsy misy ny fiainana mandrakizay
Tsirairay avy amintsika mahalala fa misy zavatra tsy marina momba ny fahafatesana. Rehefa mandeha any fandevenana, misy na oviana na oviana piñatas sy ny confetti. Misy nidonam-pahoriana. Misy ranomaso. Misy fifaliana koa matetika mba hankalaza ny fiainany. Fa rehefa mieritreritra momba ny fahafatesana, misy be dia be ny alahelo anjara. Satria ny fahafatesana no diso. Tena voajanahary.
Izahay azon'izany ho faty, fa toa tahaka ny iray monja amin'ireo zava-misy isika, tsy maintsy miatrika. Fa izao koa no zava-nitranga rehefa avy amin'izao tontolo izao ny ota niditra. Ny fahafatesana mitranga satria mpanota izahay. Tsy marina. Ary raha tsy izahay indray mipi-maso ny famoizam-po lalina, tsy misy amintsika miandry fahafatesana. Tiantsika ny ho velona.
Ve ny hevitrao ianao handeha ho any an-danitra rehefa maty? Maro amintsika no mihevitra ny lanitra ho toy ny toerana tsara, izay ny havanay any Rehefa misy ny. Ary izahay manantena isika kinda tonga any. Ary izay hoatran'ny, fa rehefa maty isika, izany tsy ny farany. Eny ary hoy i Paoly, raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty, dia tsy misy na inona na inona.
"Ary ireo izay efa nodimandry ao amin'i Kristy no very. Raha ao amin'i Kristy no anantenantsika amin'izao fiainana izao ihany, isika ny olona rehetra tena mba nahita famindram-po. "
Nisy ny olona fa tia izay efa lasana, mitovy amin'ny antsika. I Paoly dia miresaka momba ny Kristianina fantatr'izy ireo izay maty. Ary Paoly dia nanao hoe: Raha tsy nitsangana i Jesosy, dia vao maty. Ry zareo nanao. Tsy misy mandrakizay amin'Andriamanitra.
Ary lasa lavidavitra kokoa aza ny hoe:, ianao tokony fo ny Kristianina. Tokony hahatsapa ratsy ho antsika.
Nahoana Izahay no mba nahita famindram-po?
Ary ny ankamaroan'ny olona izay mihevitra ny Kristianisma ho toy ny zavatra izay mankany am-piangonana fotsiny indraindray tsapaka, ary angamba ianao hahatsiaro ny Tompo ny vavaka, tsy azoko hoe nahoana i Paoly no milaza izany. Satria ao an-tsainy, Ny hany zavatra tena very ny Kristianina no Alahady. Fa fanarahana an'i Kristy dia mihoatra lavitra noho izany.
Kristy miantso ho an'ny rehetra. Angatahany ny zava-drehetra. Hoy izy fa manolotra ny fiainantsika teo. Fa mitondra ny hazo fijaliana. Fa manorina ny fiainantsika manodidina azy. Ary raha tsy tena mifoha, vendrana izahay. miantra antsika. Satria isika rehetra efa natao dia mametraka ny fiainantsika lasa fa tsy antony.
Raha i Kristy tsy hanangana, tsy misy ny fiainana mandrakizay.
Fa satria natsangany, misy ny fiainana mandrakizay!
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, fa na iza na iza mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
Misy ny fiainana mandrakizay. Afaka hatsangana. Sy hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Ny Kristianina no Tsy mba nahita famindram-po. Ny Kristianina ireo izay manana fanantenana any ankoatry ny fasana. Inona no azonao atao ny olona izay tsy matahotra ny fahafatesana? I Paoly dia ohatra lehibe izany ao amin'ny Filipiana 1. Izy no tsara amin'ny fahafatesana, satria midika fa mahazo handeha hiaraka Jesosy.
Ve ianao fa manana tahotra fa i Paoly? Izany ihany no avy amin'ny olona iray izay no natoky ny tena zava-misy ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty i Jesosy.
Raha fintinina: Eny. Tsy zava-dehibe raha toa ka nitsangana i Jesosy. Ary izy dia mahazo ny. Ny tantara dia mitovy amin'ny olon-kafa amin 'izany dia maty. Ny olon-drehetra maty. Nefa tsy ny rehetra mahazo ny. Jesosy nitsangana. Ary mampanantena Izy fa raha ao Aminy isika, koa hitsangana ihany ka mandany ny mandrakizay aminy. Efa natoky azy?
Paul • Aprily 18, 2014 amin'ny 11:47 aho • navalin'i
Misaotra anao, Pastor Lee. “Jesosy no Ilay Andriamanitra izay naniraka ny hamerina, ary indrindra mba hamerina antsika ny Mpamorona. Izay no vaovao tsara.” Izany no vaovao tsara! Ny anjara confetti nanao ahy dia manaraby. Manana manam-paharoa vazivazy rehefa mitory. Tsara izany.
Evan • Aprily 18, 2014 amin'ny 2:14 PM • navalin'i
Tiavo ny maha-tokana no hovonoina ho tsy nihevitra toy izany Kristianisma lalina ny fivavahana hafa ny mahafantatra isika ihany no afaka milaza isika Mpamonjy izay maty sy nitsangan-ko velona, izy raha ny marina eto ka lasa tamin'izany andro izany mba handeha hamboatra fitoerana ho antsika
CynthiaAghomon • Aprily 18, 2014 amin'ny 6:27 PM • navalin'i
Dia ny zava-drehetra tokoa i Jesosy…tsy misy Kristianisma tsy misy an'i Jesosy sy ny fiainany raha toa tsy misy dikany sy fanantenana intsony ny fanomboana, ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Mivavaka aho be dia be ny maso dia hisokatra ny fahamarinan 'be voninahitra izany hetsika.
miresaka momba: VulcanYouth » Easter!!
JacobAlger • Aprily 20, 2014 amin'ny 8:11 PM • navalin'i
Man Trip, Misaotra ny fizarana. Izany no hafatra mahery vaika iray. Efa mpino satria zanak'osy aho, fa nahita ny tenako manontany izany fanontaniana tena fotsiny ity Paska. Ny hafatra sy ny fampianaran'i Paoly, ka mahatonga azy io mazava. I mankasitraka ny fonao sy ny hafatra, fitahiana ny Dude!
Mario A. Ramirez • Aprily 22, 2014 amin'ny 4:04 aho • navalin'i
Misaotra fotoana lehibe Bro
didi • Aprily 22, 2014 amin'ny 7:22 aho • navalin'i
Mamelà ahy noho ny tsy mora, fa rehefa ianao no hanova ny anarany tsy ho eny mirehareha amin'ny tompoko mba naorina mba mirehareha? koa, tsara kely eo amin'ny teboka ny Paka!
TAREKcReSTIK • Mey 20, 2014 amin'ny 8:27 PM • navalin'i
Aye diany, Manana fanontaniana aho, whatre ny heviny momba Paska sy ny fotoam-pivavahana voatendrin'i ara-baiboly?
Greg • Novambra 3, 2014 amin'ny 7:58 PM • navalin'i
Tena faly aho noho ny fizarana ny Tenin'Andriamanitra! Ity lahatsoratra ity dia mampirisika ahy be. Efa ho faran'izay sarotra hatrany an'i Jesosy’ fandresena eo anoloan'ny an-tsaiko. Efa ho efa ho herintaona satria zokiko lahy ny 17 yrs maty. Ao amin'ny tselatra Andriamanitra nitondra ny fiainany amin'ny alalan'ny inona no toa tanteraka loza izay tsy tokony ho nitranga. I nandany andro toy izany aminy; ny fiainako manontolo niova tamin'ny fomba lehibe indrindra hatramin'izay–sarotra ny mino fa ho avy aho ny amin'ny ho ela niainana kokoa noho izy ve no. Ho hitako azy indray? Ho afa-mitsangana?
Tonga tany ity lahatsoratra ity satria dia tena nampahery ny hira “Lazarosy.” Efa nitahy ahy be, ary tsy maintsy misaotra anareo noho ny fizarana ny fahamarinana lalina izay, satria i Jesosy natsangana tamin'ny fandresena ny fahafatesana, Fantatro fa hahita Azy hiatrika ny tarehy…ary koa ny rahalahiko. Manantena aho fa namporisika ihany koa ianao!
miresaka momba: La Sagrada Familia, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • Oktobra 15, 2016 amin'ny 11:34 aho • navalin'i
ity tantara ity dia lalina fa miankina amin'ny tantara rehetra ny zava-misy i Kristy natsangana tamin'ny maty …
mpaminany hafa rehetra mbola tsy nahita ny fahazavan'ny andro hatramin'ny enina nandeha tongotra lalina ….
500 vavolombelona dia tsy zavatra nanohitra hamela … milaza ny bloke toy ny Jay Z no maty ary telo andro taty aoriana dia niverina avy any amin'ny maty !!!!
ny haino aman-jery goavana washout ho tsy???
fa ho ampy inona no mety izay 500 pepo ho vavolombelona izany fisehoan-javatra araka ny hovelarina ???
fa raha tsy i Kristy natsangana tamin'ny maty any an-tsaha sary an-tsaina ny Jiosy fahefana andro ho nahita !!!!
ny ny vokany dia ho miavaka …
Kristianisma no ho tena fitenenan-dratsy fivavahana ao amin'ny tany tsy misy???
Fa hatrizay mahalala ny tantara mifarana no anantenantsika fa ny maty ao amin'i Kristy no hatsangana, ary izany dia mihoatra noho ny vaovao tsara!!
JNote • Mey 3, 2017 amin'ny 1:07 PM • navalin'i
Trip olona, hotahian'andriamanitra anie ianao! Mihaino ny toriteny sy ny fampianarana sy ny mozika, Tena mankahery ahy. Izany vaovao tsara, ny Filazantsara, izany no zavatra tokony ho velona ny olona avy matetika kokoa ary Faly aho mahita anao manao ny olona. Nojereko ny fomba mampiasa anao, manampy ahy be dia be isika satria be dia be ny manao izany zavatra, musically sy amin'ny asa fanompoana, ka nanao hoe: eny foana amin'Andriamanitra ny olona, Aho mivavaka ho anareo.